Matrox, IBC 2019 JT-မိုင်အော်ပရေးရှင်းစမ်းသပ်ခြင်းအစီအစဉ်ကျော်ပြီ SMPTE ST 2110 ဖို့လုပ်နေဆဲဖြတ်ချက်ကိုထင်ဟပ်စေ - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » သတင်း » Matrox SMPTE ST 2019 ဖို့လုပ်နေဆဲကတိသစ္စာတယ်ဆိုတာကိုပေါ်လွင်စေပါတယ် IBC 2110 JT-မိုင်အော်ပရေးရှင်းစမ်းသပ်ခြင်းအစီအစဉ်ကျော်ပြီ
Montreal မှာ Quebec - စက်တင်ဘာလ 13, 2019 -Matrox®ဗီဒီယို Matrox X.mio5 Q25, Matrox X.mio3 အိုင်ပီနှင့် Matrox DSX LE5 D25 ကြောင်းကြေညာဖို့ကျေနပ်ဖြစ်ပါသည် SMPTE ST 2110 network interface ကို Controller ကို (NIC) card အားလုံးအောင်မြင်စွာနှစ်ဦးစလုံးအတှကျကှနျယကျမီဒီယာ (JT-မိုင်) ကိုစမျးသပျအစီအစဉ်လတ်တလောပူးတွဲ Task Force လေပြီ SMPTE ST 2110 စံနှင့် NMOS / JT-မိုင် TR-1001 သတ်မှတ်ချက်။ Matrox ရဲ့ပါဝင်မှုနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းပဏာမခြေလှမ်းမှနည်းပညာဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုများအတွက် Multi-ရောင်းချသူအပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါများအတွက်အမြင့်ဆုံးစံနှုန်းထိန်းသိမ်းအတွက်အသစ်တဖန်ကတိကဝတ်ကိုကိုယ်စားပြု SMPTE ST 2110, IP ကို-based များထားရှိ။
အဆိုပါ IBC 2019 IP ကိုဟန်ပြမှပြန်လာသည့် JT-မိုင်စမ်းသပ်ခံရအစီအစဉ်ကိုရောင်းချသူပစ္စည်းကိရိယာများပွင့်လင်းစက်မှုလုပ်ငန်းစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အတူ aligns ဘယ်လောက်သို့ သာ. ကွီးမွတျ, ပိုဖော်ပြထားပြီးသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုနှင့်အတူအိုင်ပီ-based ပစ္စည်းကိရိယာများ၏အလားအလာဝယ်ယူသူပေးထားပါတယ်။ အဆိုပါ Matrox X.mio5 Q25, Matrox X.mio3 အိုင်ပီနှင့် Matrox DSX LE5 D25 ကတ်များသူတို့ထဲကတစ်ဦးချင်းစီချောမွေ့စွာယင်းအဘို့ကိုကိုးကားသတင်းရင်းမြစ်အဖြစ်အမှုဆောင်နှင့်တကွ, တိကျခိုင်မာစွာ JT-မိုင်စမ်းသပ်အစီအစဉ်ကိုခံယူ SMPTE ST 2110 ရုံးတင်စစ်ဆေး။ အဆိုပါ NMOS / JT-မိုင် TR-1001 စမ်းဘို့, တူညီတဲ့ Matrox NICs built-in ဟာ NMOS IS- များအတွက်အထောက်အကူ TR-1001-1 နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ recommendation.With အဘို့ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းစနစ်-Level ဆက်သွယ်မှုနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ built-in NMOS ထောက်ခံမှုသရုပ်ပြ 04 Device ကို Discovery နှင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်း, NMOS IS-05 စက်ပစ္စည်း Connection ကိုစီမံခန့်ခွဲမှု, NMOS IS-09 စနစ်, LLDP, DHCP, နှင့် DNS-SD ကသတ်မှတ်ချက်များ, အလွယ်တကူ ST သို့သူတို့ရဲ့ဖြေရှင်းချက်ပေါင်းစည်းဖို့ OEMs ဖွင့် Matrox NICs လုံးဝစိတ္တဇအားလုံး low-level design ကိုအလုပ် 2110 ကွန်ယက်ကိုပတ်ဝန်းကျင်။
အဆိုပါ JT-မိုင်စမ်းသပ်ခံရအစီအစဉ်တွင်အသားပေး Matrox ST 2110 ကတ်များ:
Matrox X.mio5 Q25 ကနေ IP ကို ​​Workflows များအတွက် ST 2110 ကို Quad 25 GbE NIC card ကို HD 4K မှ
Matrox X.mio3 အိုင်ပီ 2110 GbE ကျော်ပေါင်းကဗီဒီယိုအပြောင်းအလဲနဲ့ onboard Multi-ရုပ်သံလိုင်းကဗီဒီယို I / O နှင့်အတူ ST 10 NIC card ကို
Matrox DSX LE5 D25 ကနေ IP ကို ​​Workflows များအတွက် ST 2110 dual-25 GbE NIC card ကို HD 4K မှ
"Matrox ၏ရှည်လျားသောအချိန်ထောက်ခံသူခဲ့ SMPTE ST 2110 စံ, ကြှနျုပျတို့ JT-မိုင်ရဲ့ IBC 2019 စမ်းသပ်ခံရပရိုဂရမ်မှတဆင့်ဒီကတိကဝတ်ကိုဆက်လက်စိတ်လှုပ်ရှားနေကြတယ် "ဟုအယ်လ်ဘာတို Cieri, အရောင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၏အကြီးတန်းညွှန်ကြားရေးမှူး, Matrox ဗီဒီယိုကပြောပါတယ်။ "လာမယ့်မျိုးဆက် ST 2110 Workflows များအတွက်ပြည့်စုံကွန်ယက်ကိုအပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါနှင့် 24 /7ယုံကြည်စိတ်ချရအာမခံစဉ် Matrox NICs, ST 2110 မှ SDI ထံမှအရိုးရှင်းဆုံးလမ်းကြောင်းပူဇော်ဖို့ built နေကြသည်အိုင်ပီ Know-ဘယ်လောက်နဲ့ထုတ်လွှင့်ကျွမ်းကျင်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ထူးခြားတဲ့ပေါင်းစပ်ကပံ့ပိုးထားပြီး။ "
Matrox ကိုကြည့်ပါ SMPTE Matrox အပေါ် IBC 2110 မှာအရေးယူဆောင်ရွက်မှုအတွက် ST 2019 NIC ကတ်များအခန်းပေါင်း E15-7 အတွက် B106, ခန်းမ 107 နှင့် IP ကိုဟန်ပြအနာဂတ်ဇုန်အတွက်ရပ်တယ်။
Matrox ဗီဒီယို 4K ၏လယ်ပြင်တွင်တစ်ဦးကနည်းပညာနှင့်စျေးကွက်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်, HDမြန်အောင်လုပ် H.264 encoding က, လက်ရှိအချိန်တည်းဖြတ်ရေး, Audio / Video Input / output ကို, streaming, A / V ကို signal ကိုပြောင်းလဲခြင်း, ဖမ်းယူ / ပလေးအောက်ကိုဆာဗာများ, ရုပ်သံလိုင်း-in-a-box ကိုစနစ်များနှင့် CGs အဘို့နှင့် SD ကဒီဂျစ်တယ်ဗီဒီယိုကို Hardware နဲ့ software ကို။ Matrox ရဲ့သူဟာ Emmy ဆုရနည်းပညာအင်အားကြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ multi-screen ကိုအကြောင်းအရာဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်ဖြန့်ဝေထုတ်လွှင့်အသုံးပြုတဲ့ပလက်ဖောင်း, ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီများ, cable ကိုအော်ပရေတာ, Post-ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံများ, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဖြစ်ရပ်ထုတ်လုပ်သူများ, ဗီဒီယိုရိုက်ကူးကျွမ်းကျင်သူတွေအတွက်, နှင့် A / V ကိုပညာရှင်များ၏အပြည့်အဝအကွာအဝေး။ 1976 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, Matrox Montreal, ကနေဒါအခြေစိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂလိကပိုင်ကျင်းပကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, ခရီးစဉ် www.matrox.com/video ။
Email: [အီးမေးလျ protected]
Matrox မီဒီယာဆက်ဆံရေးများကနောက်ဆုံးပေါ်ရေးသားချက်များ (အားလုံးကြည့်ရှု)
Next ကို-မျိုးဆက်ကျောင်းသားများဗီဒီယို Server များနှင့်အတူ High-အရည်အသွေး Multi-Channel ကို XAVC ပံ့ပိုးမှုများအတွက် avid ရွေးချယ် Matrox M264 codec ကဒ်များ - စက်တင်ဘာလ 14, 2019
Matrox ဧကရာဇ် EDGE ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ Vimeo စတူဒီယိုနှင့်အတူတိမ်တိုက်-အခြေခံပြီးထုတ်လုပ်မှုကိုဖွင့် - စက်တင်ဘာလ 14, 2019
Vizrt selection Matrox X.mio5 Q25 ကဒ်များကို Power viz အင်ဂျင်4မှ - စက်တင်ဘာလ 14, 2019
Aurora ကနျြးမာရေးကင်ပိန်း / ကိုလိုနီထောက်ခံ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်-လူမှုမီဒီယာ ထုတ်လွှင့်-SocialMedia ထုတ်လွှင့်-SocialMeida CES2017 ဒစ်ဂျစ်တယ် Nirvana တည်းဖြတ်ခြင်း ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor IBC မီဒီယာစောင့်ကြည့်ရေး MStar SJGolden - SoftAtHome လှံ & Arrows စာတန်းထိုး ကိုလိုနီခေတ် ကိုလိုနီခေတ် - သတင်း ကိုလိုနီ / ချီကာဂို ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်	2019-09-13
ယခင်: Matrox အခုဆိုရင်ကမ္ဘာ့သာလျှင်လေး-Channel ကို 4Kp60 XAVC codec Card ကိုသင်္ဘောတင်
နောက်တစ်ခု: Vizrt selection Matrox X.mio5 Q25 ကဒ်များကို Power viz အင်ဂျင်4မှ